कठिन यात्रा (प्रकाशकीय) – Sahara Times
१६ भाद्र २०७८, बुधबार २२:१८
हामी १२ वर्ष पुरा गरी १३ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । यो १२ वर्षसम्म हामीले पाठकको आपार माया पाइ रह्यौं । पाठककै मायाले यो यात्रा सम्भव भयो । तर यो १२ वर्षका यात्रा सहज रहेन । २०६२\_०६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिको मधेश जनविद्रोह । पत्रिकाको स्थापना भएदेखि नै राजनीतिमा यति उथल पुथल भयो कि कहिले देशलाई ठिक ट्रयाकमा चल्न दिएन । देशका सबै कुरा राजनीतिकसँग जोडिएका हुन्छन् । यहाँसम्म कि देशको सेयर मार्केट पनि राजनीतिक अवस्था हेरेर तलमाथि भइरहेका हुन्छन् । देशको राजनीतिक अवस्था कहिले स्थिर रहेन ।
संविधान निर्माणको काम सुरु भएको थियो । विभिन्न दल तथा समूहहरुले दवावमूलक कार्यक्रम गरिरहेका थिए । सधै आन्दोलन भइरहन्थ्यो । संविधानसभा विघटन भएपछि पनि आन्दोलन भयो । फेरि चुनाव भयो । चुनावपछि संविधान निर्माणको काम सुरु भएपछि मधेशवादी दलले पुनः आन्दोलन सुरु गर्यो । तेस्रो आन्दोलन लामो समयसम्म चल्यो । मधेश आन्दोलनको आडमा २०७२ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो । एकातिर मधेश आन्दोलन अर्कोतिर नाकाबन्दी, त्यसले देशको हालत एकदमै खराब भइरहेको थियो ।
नाकाबन्दी भन्दा पहिला २०७२ बैशाखमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आएको थियो । त्यसबाट जनता उम्किन नपाउँदै नाकाबन्दी लागेको थियो । नेपालको अवस्था निकै खराब चलिरहेको थियो ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुँदा एकातिर दीपावली भइरहेको थियो भने अर्को तिर ब्ल्याकआउट । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपनि देशमा खुशियाली थिएन । संविधान जारी भएकै दिन आन्दोलनमा एकजनाले पर्सामा सहादत दिए । संविधान जारी भएपनि देश कहिले स्थिर रहेन । मधेशवादी दल तथा आदिवासी जनजातिहरुको विभिन्न संस्था तथा संगठनको आन्दोलन लामो समयसम्म भइ नै रह्यो । मधेशवादी दलले कहिले मधेश केन्द्रीत आन्दोलन त कहिले काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गरिरह्यो । त्यसले देश कहिले स्थिरताको सांस लिन सकेन । तीनै तहको चुनाव भयो । कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो । यसले अब ठिक ढंगले चल्छ, आर्थिक सुधार हुन्छ । विजनेश, व्यपार राम्रो चल्छ भनि सबैमा आशा पलाएको थियो ।
तर तत्कालिन नेकपा (एकीकृत) का अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको दुई वर्ष नपुग्दै पार्टीमा खटपट सुरु भयो । अन्ततः पार्टी विभाजन भयो । देशमा त्यस्तै स्थिरता सुरुभयो । राजनीतिक झेल जनताले झेलिरहेको बेला २०७६ को अन्तिमदेखि कोरोना महामारी सुरु भयो । नेपालको आर्थिक अवस्था अलिकति तङग्रीन सुरु गरेको थियो । कोरोनाले सबै तहस नहस गर्यो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा देश गुज्रिरहेको छ । देशको यस्तै उथल पुथलको यात्रामा सहारा टाइम्स पनि हिडि रह्यो । जसरी देशको रअवस्था कहिले ट्रयाकमा आएन, त्यसैगरि सहारा टाइम्सको यात्रा पनि कहिले ट्रयाकमा आएन । यात्रा कठिन नै रह्यो तर त्यो कठिनता हामीले पाठकलाई कहिले महसुस हुन दिएनौं ।
हामी अनेक दुख पाएर पनि जनतालाई सही र सत्य समाचार दिने प्रयासमा रही रहयौं । कहिले आधा पेट खाएर त कहिले पेटभरि खाएर । देशको अवस्थाले गर्दा ठूला लगानीको मिडियाको हालत खराब छ भने यो साना लगानीको मिडिया कसरी बाँचेका होला, कसरी चलेको होला एकपटक सोचेर हुर्नुस् त । तैपनि हामी निरन्तर आइरहेका छौं । जस्तोसुकै कठिन परस्थितिमा पनि पाठकको मायालाई कायम राखि रह्यौ । अन्त्यमा तपाईहरुको माया यस्तै रहि रह्यो भने अगामी दिनमा पनि हामी एक निष्पक्ष र साहसी पत्रिकाको रुपमा तपाईहरु समक्ष ल्याई रहन्छौ । १२ वर्षसम्म माया गर्नु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद । अगामी दिनमा पनि यस्तै माया पाइ राखौ ।
Tags: #laita, saharatimes
पार्टी फुटाउने सरकार !
१६ भाद्र २०७८, बुधबार २२:१६
अब नयाँ दल किन ? (सम्पादकीय)
१ भाद्र २०७८, मंगलवार २१:२८
रेशम चौधरीको रिहाइ (सम्पादकीय)
६ असार २०७८, आईतवार ०९:३७
राजेश झाको समावेशी फण्डा (सम्पादकीय)